Amajikijolo nezithelo zesifo sikashukela > Ukudla ngesifo sikashukela
Amajikijolo nezithelo zesifo sikashukela
Wonke umuntu onenkinga yesifo sikashukela kufanele azi ukuthi inhlala-kahle yabo, kanye nokuba khona kwezinkinga, ngokuqinisekile kuzoncika komsoco. Ngeshwa, uhlu lwezifo ezenqatshelwe lude, futhi lunezithelo eziningi esizithandayo. Cabanga ukuthi angadliwa ngani amajikijolo lapho enesifo sikashukela sohlobo 2, nokuthi angafunda kanjani ukubala inani lawo elivikelekile.
Izici ukusetshenziswa kwamajikijolo
Isifo sikashukela, hhayi wonke amajikijolo anempilo. Sikhuluma ngokuyinhloko ngezinhlobo zazo ezinobuthi futhi ezinoshukela nezomuncu. Umuntu udinga ukubalwa ngokucophelela kwenani lama-carbohydrate, ngokuya ngokudla, kanye nokusetshenziswa kwale mikhiqizo ngamanani angenamkhawulo.
Zonke izithelo zidliwa kuphela kusuka kuhlu olungezansi. Ngaphezu kwalokho, ekudleni kufanele kube okusha kuphela. Kwesinye isikhathi ungafaka amawolintshi, amapetshisi, ama-apricots, ulamula. Bafakwa ekudleni ngezikhathi ezithile, futhi kuphela uma lesi sifo sinxephezelwa.
Kuyadingeka ukucebisa ukudla kwakho ngezithelo ezicebile kuma-antioxidants. Banomphumela owengeziwe wokuphulukisa umzimba, futhi, ngaphezu kwalokho, baneqhaza ekulamuleni ushukela wegazi. Ukwazi ukuthi yiliphi ibhulashi elisebenzayo kushukela, ungacebisa indlela yokudla ethize edliwayo ekudleni futhi uzizwe ujabule.
Izithelo zidliwa zintsha futhi zifriziwe. Zingadliwa nokunye ukudla okunempilo, nokwenza amasaladi, ngokwesibonelo. Uma uzidla ngamanani amancane, futhi futhi ucabangele nokudla okungenampilo, ngeke zikulimaze.
Futhi eyodwa i-caatat: imikhiqizo elandelayo evunyelwe ilungele ukusetshenziswa kuphela yiziguli ezinohlobo oluzimele lwe-insulin. Kepha ngohlobo lwesifo esincike e-insulin, zenqatshelwe ngokuphelele: isiguli siphoqelelwa ukuba sigcine i-glycemia kuphela sibonga imithamo ye-insulin ebalwe ngokunembile.
Yini engingayidla kumajikijolo?
Akunamajikijolo amaningi avunyelwe ngohlobo 2 sikashukela. Odokotela bavumela ukusetshenziswa kwezitsha ezinjalo zesifo sikashukela sohlobo 2.
UCherry Uhlala endaweni yokuqala "ngezinga lokuba usizo." Futhi konke ngoba kuqukethe izinto eziningi ezinempilo. Ezinye iziguli, zingazi ukuthi yiziphi izithelo namajikijolo ongazidla nesifo sikashukela, zenqaba ukunambitha ama-cherries ambalwa. Lokhu akusizi ngalutho: ngenkambo elula yesifo, ungasidla, ungahlali ushukela.
Ama-Gooseberry aqukethe imicu eminingi namavithamini. Le berry yabanesifo sikashukela isiza ukunciphisa ushukela wegazi. Futhi njengoba kusekhona i-fructose encane kuyo, ungayisebenzisa kakhulu.
Okusajingijolo kubambezela inqubo yokuguga. Kodwa-ke, leli berry lohlobo 2 sikashukela oluzoba yingozi uma lingaqedwa ngobuningi. Iqiniso ngukuthi liqukethe iningi le-fructose.
Ama-Strawberry aqukethe i-magnesium eningi, uvithamini C, othinta kahle isimo senhliziyo.
Ama-diabetes angaba namajikijolo, anamavithamini amaningi kanye nama-organic acid ekwakhiweni kwawo. Lokhu, ngokweqiniso, kuyisihluthulelo. Ngalesi sifo, kubalulekile ukuphuza ama-decoctions kusuka emaqabunga alesi sitshalo.
I-Cherry emnandi (kufanele idliwe kancane, futhi ngokuthuthukiswa kwe-pathologies esiswini, ukukhuphuka kwe-acidity yejusi yesisu, kuphambene ngokuphelele).
I-sea buckthorn isheshisa ukuphulukiswa kwenxeba, okuhambisana nalesi sifo kubaluleke kakhulu. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo owusizo unezakhiwo zokupholisa amanxeba.
I-Redcurrant inamavithamini amaningi azuzisa umzimba.
Ukwazi ukuthi uluhlobo luni lwamajikijolo ongaludla onesifo sikashukela, kumele ukhumbule njalo ukuthi kumele kudliwe kubomvu. Akunakusho ukuthi kufanele udle ukudla okusemathinini kanye nama-compotes. Ukwazi ukuthi imiphi amajikijolo angadliwa ngesifo sikashukela futhi angenakukwenza, ungagcina ushukela wakho evamile.
Mayelana namajikijolo ukugcina isifo sikashukela sihlolile
Iziguli eziningi, zingazi ukuthi imuphi amajikijolo angenzeka ngesifo sikashukela, acabanga ngokuphelele ukuthi azikho noma zimbalwa kakhulu. Kunemikhiqizo ethile esiza ukuvimbela ukuthuthukiswa kwezinkinga zesifo sikashukela. Imvelo inothile ngemithi, futhi noma ngabe inokugula okungathi sína ikulungele ukusiza. Futhi luhlobo luni lwamajikijolo angadliwa noshukela, udokotela ancoma. Lokhu kufaka phakathi.
I-Viburnum ithathwa njengelusizo kakhulu kulokhu kugula okungathi sína, ngoba iqukethe ushukela omncane kanye nesethi yamavithamini awusizo, ama-amino acid.
I-Rosehip. Isiza itiye ezinqeni ze-rose. It, njengenye itiye elisuka amajikijolo nezithelo zesifo sikashukela, kudliwa ngaphandle koshukela ongeziwe. Isiphuzo sisusa ngokuphelele ubuthi emzimbeni futhi sisize ukulawula i-glycemia.
Ama-Blueberries alawula amazinga kashukela futhi avikele i-retina, etholakala kakhulu ekushintsheni kwezifo.
Ama-Blueberries anomthelela ofanayo.
Umlotha wasentabeni ucebisa umzimba ngezinto eziningi eziwusizo, ikakhulukazi amavithamini, izakhi ezilandelwayo nama-antioxidants.
IBlackcurrant iyisigcino sangempela sevithamini C. Ucwaningo lukhombisa ukuthi kuyasiza ukuvikela izinguquko ezingaphenduki emehlweni. Kodwa-ke, kukhona i-caveat eyodwa: kumele idliwe ngamanani alinganayo kakhulu.
Ngakho-ke, ukwazi ukuthi iyiphi ibhulashi elisebenzayo kushukela, ungasigcina ngempumelelo isifo sakho silawulwa. Ngaphandle kokuthi odokotela abaningi banikeza impendulo evumayo, kungenzeka ukuthi badle amajikijolo anesifo sikashukela, kusadingeka ukulungisa inombolo yabo ngokuya ngokudla okukhethiwe ngakunye.
Amajikijolo avinjelwe ushukela
Isiguli ngasinye sidinga ukwazi ukuthi yisiphi isigaxa esingedliwe yisifo sikashukela. Lokhu kuzosiza ukuvikela kuma-hyperglycemia kanye nezinkinga ezinkulu.
Ngakho-ke, amajikijolo nezithelo ezivunyelwe kuzoba yingozi enkulu uma uzisebenzisa ngendlela enoshukela. Kwenqatshelwe ngokuphelele ukudla izithelo ezomisiwe. Noma kucatshangelwa ukuthi iqoqo lezithelo namajikijolo kungenzeka ngesifo sikashukela, le ndlela izokulimaza. Ijusi elisanda kufakwa livinjelwe: liqukethe inani elikhulu likashukela, futhi, ngokufanelekile, ngisho nokusebenzisa inani elincane leziphuzo ezinjalo kuholela ku-hyperglycemia.
Lokhu kudla kuqukethe ushukela omningi. Futhi noma uzidla kancane, umuntu onesifo sikashukela angalinyusa ngamandla izinga le-glycemia.
Ngakho-ke, ukwazi ukuthi iyiphi ibhulashi elusizo kushukela futhi engadli, ungakugwema i-hyperglycemia futhi ucebise ukudla kwakho ngamavithamini.